ကြာ၇မီ၇ဲ့ အဓိပတိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ကြာ၇မီ၇ဲ့ အဓိပတိ
Posted by Wai Phyoe on Jan 20, 2012 in Community & Society, Complaint / Claim | 15 comments
ကျွန်တော်ကအ၇င်တုန်းကတော့ အဓိပတိပ၇ိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ။နောက်ပိုင်း ကားအသစ်(တ၇ုတ်မ)တွေ
ပြောင်းပြီးကတည်းကလုံးဝမစီးတော့ပါဘူး။အဓိက ကတော့စီးချင်စိတ်ကိုမ၇ှိတော့လို့ပါ၊ခုခေတ်က အားလုံးက
အချိန်လုပြီးလုပ်နေ၇တဲ့ခေတ်ပါ။ အထူးကားဆိုပြီး ၂၀၀ပေးစီး၇တယ်။မှတ်တိုင် တိုင်း ထိုင်တယ်ဗျာ တ၇ားလား
“ကြာ” တာကိုပါ။ ဘယ်သွားသွားမေ၇ာက်နိင်တော့ပါဘူး။အထူးကား၇ဲ့စံနှူန်းထဲကတစ်ခုကိုပြော၇၇င် မြန်ဘို့မလို
ပါဘူး။ဒါပေမယ့် အထူးကားလို့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး မှတ်တိုင်တိုင်း ထိုင်တာတော့လွန်တယ်ဗျာ။၇ိုး၇ိုး ၅၀ တန်ကား
တွေကကျော်တက်ကုန်တယ်။နောက်ပြီးသူတို့ကားကြီးတွေနဲ့ အိစိအိစိ သွားပြီး လမ်းပေါ်မှာလည်းကို့၇ိုးကား
ဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါ။၇ိုးနေကျပါပြီ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကားသမားတွေမိုက်၇ိုင်းတာကိုပါ။ပိာုတစ်
နေ့က မဖြစ်မနေ အဲ့ဒီ တ၇ုတ်မ ကိုစီးဘို့အခြေနေဖန်လာပါတယ်။ကယ်…..ဒီတစ်ခါတော့မထူးဘူးစီး၇တော့မယ်
ဆိုပြီး တက်စီးလိုက်မိပါတယ် ၇ူးေ၇ာဗျာ။ အထူးကားတဲ့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပါပဲ။ဘယ်လောက်စုတ်လဲဆို
ကားကထိုင်ခုံတွေမပါပါဘူး။ ကားအောက်မှာ စပါယ်ယာညအိပ်ထားတဲ့ ခြင်ဆေးခွေပြာတွေက လဲနေ၇ာအနှံ့ပါ
ပဲ။ပိုဆိုးတာက မ၇ှိမဲ့၇ှိမဲ့ကားခုံ က အ၇ည်တောင်ထွက်နေပါပြီ။မှန်တွေကလည်းဖုန်တွေကြီးပါ။ ကားခုံမှာကပ်နေ
ကွမ်းယာစားပြီး တပျစ်ပျစ်နဲ့ဗျာ။ကားအမိုးပေါ်ကစာဖတ်ကြည့်တော့ “ ကွမ်းမစား၇၊စည်းကမ်း၇ှိပါ”တယ့် အော်
“Always do Tunning and Shinning” တဲ့ လုပ်မလုပ်တော့မသိဘူး ကျွန်တော်စီးခဲ့တဲ့ ခုံနောက်ကစပါယ်
ယာချွတ်ထားတဲ့ သေးစော်နံနေတဲ့ ဘောင်းဘီကသက်သေပြနေတယ်။ နောက်ပိုင်းဆက်ဆံေ၇းကလည်းဘာ
ကျဲသလည်းမမေးနဲ့ တစ်လောကလုံးသူ့တို့လုပ်စားထိုင်စားနေတဲ့မျက်ခွက်တွေနဲ့ချည်းပါပဲ။ ပါ၇မီကိုတော်တော်
လေးစိတ်ကုန်နေပါပြီ။ ကြိုက်တဲ့ကားလိုက်စီးကြည့်ပါ သူတို့ကားတွေလောက် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကပ်ထားတဲ့
ပါ၇မီကလူကြီးတွေလည်းတစ်စက်မှာအသုံးမကျပါဘူး။လူကြားကောင်းအောင် MTV တွေ၇ိုက်ဘာ၇ိုက်နဲ့
ကားတွေကစုတ်ပြတ်သလို ၀န်ထမ်းတွေကလည်း၇ွဲ့ပဲ့နေပါပြီ အ၇င်လို့လုံးဝမပာုတ်တော့ပါဘူး။ အထူးကား
ဆိုပြီး ပြည်သူလူထုကို ၇ိုက်စားနေတဲ့ထဲမှာ ပါ၇မီက ထိပ်ဆုံးကပါ။ ကားစီး၇တောင်လန့်တောင်လန့်ပါတယ်
အားလုံးကော်ကားတွေကြီးပါပဲ။ပြီးတော့ကားဘောဒီတွေက ပေါက်နေတာ အလွန်သတိထားဖို့ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်သိချင်တာက ပါ၇မီကလူကြီး (အကောင်)တွေဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာကိုပါပဲ။ ယူနီဖောင်းကြီးတွေ
၀တ်။၇ဲလိုလိုဘာလိုလို ဦးထုပ်ကြီးတွေဆောင်းပြီးတော့ နည်းနည်းလေးမှာအသုံးမကျကျဘုးလား။ခင်ဗျားတို့
မ၇ှက်ဘူးလား။၇ှက်တတ်၇င် ခင်ဗျားတို့ကော်ကားကြီးတွေပုံပြီး မီး၇ှိ့လိုက်စမ်းပါဗျာ။ အထူးကားလို့တော့မပြောနဲ့
ဗျ။ ၂၀၀ ပေးဘို့နေနေသာသာ ဂိတ်တိုင်းထိုင်လွန်းလွန်းလို့ အလကားပေးစီးတောင် သနလို့မစီးချင်ဘူးဗျာ။
ကပ်ထားတဲ့စာတွေကိုပဲအ၇င်ဖြုတ်လိုက်ပါအုံး ကျွန်တော်သာခင်ဗျားတို့နေ၇ာမှာဆို ၇ှက်ပြီးလဲသေလို့၇ပါ
(မှတ်ချက်။ ။ယခုကျွန်တော် ဝေဖြိုး မြန်မြန်ဆန်ဆန်ေ၇ာက်တဲ့ ဒိုင်နာကို ၁၀၀ ပေးပြီး နောက်ကတွယ်စီး
ကာ လေကောင်းလေသန့်၇ှူပြီး စိတ်ချမ်းသာနေပါကြောင်း) 
ထွက်ချင်လဲ ထွက်လို့ မရ
ခုံနှစ်တန်းလူပြည့် အလယ်ခေါင်လူပြည့် သွားလမ်းက ကျဉ်း
အပေါက်ဝနားရပ်မိလို့ ကတော့ စုံလည်လည်ပြီသာမှတ်..
အနောက်ကတိုးထွက်လာတဲ့လူတွေ.တိုးလို့ …စုံလည်လှည့်ပြီး ရှောင်ပေးရတာ
အရမ်းမှန်တယ်… ကို ဝေဖြိုး, စစချင်းတုန်းက အရမ်းကို စီးလို့ ကောင်းခဲ့တာပါ.. အခုတော့ ခုံတွေကိုဖြုတ် လူတွေကို ပိုတင် မှတ်တိုင်မှာ နောက်ကားမလာမချင်းရပ် ၏လို့ တခါခါ စပယ်ရာဆိုတဲ့ မလောက်လေးမလောက်စား(အသက်အားဖြင့် ၁၄ ၊ ၁၅ လောက်) လေးတွေက ဟိုးဘက်တိုးပါအုန်း ဒီဘက်တိုးပါအုန်းနဲ့ ၊ ကြာရမီက လူကြီးမင်းတွေ မသိလို့လား မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြလားမသိဘူးဗျာ ၊ ပေးရတော့ ၂၀၀ ကားတွေက စုတ်လွန်းလို့ အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်ဆို မစီးရဲတော့ဘူး တော်ကြ ဘော်ဒီပြုတ်ကျန်ခဲ့ မှာကြောင့်လို့…
ဟယ်သူများကောင်းကြောင်းတွေအဲလောက်ကြီးမရေးနဲ့လေ။ သွပ်ပြားမနေတတ်တော့ဘူး။ ရှက်ချာကြီး။
ဟီဟိ ( ရှက်လို့ )
မန်းလေး မှာ ဒီ ဒုက်ခ မရှိ သွားချင် ခွပြီး စက်နိုး ဝီးဒေါက် ရောက်ရော၊စစ်ကိုင်း ကျေက်ဆည် ထိ တောင်
လစ်တာပဲ။ ရန်ကုန် ရောက်ရင် တော့တေ ပြီပဲ။ ကားမစီးတတ်တော့ ဟိုမေးဒီမေး၊ ကားပေါ်မှာ နေရာ
မယူတတ်တော့ စပယ်ယာ က ဟောက်၊ သူများတိုက်မိတော့ ကောင်မလေးတွေ က မျက်စောင်းထိုး၊
တက်ကစီ စီးတော့ ကားသမားက မတန်တဆ နှိပ်။ ဝူုး စိတ်ကို လေ ရော၊ ရွာထဲ က ညလေးတွေ ကူမှ
လိုင်တစ်ခေါက်ပြန်လာရင် တစ်ဝက်ဘဲလိုင်းကြေးသွင်း ကျန်တာ ခွဲယူနေတော့ ပြောသူမောပြီဘဲရှိမယ်
ဖြစ်နိုင်ရင်မစီးမိအောင် နေရင်း သူတို့ခိုးနေတဲ့ငွေတွေ ရော့အောင်လုပ်. ဒါဘဲတတ်နိူင်မှာလေ
ဒိုင်နာကို ကြည့်ကျက်လည်းစီးဦး ဝေဖြိုးရေ… ကြာရမီကတော့ အပြန်တော့ စီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် ဧည့်စာရင်းတိုင်ရတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒီတစ်စီးပဲရောက်တော့လည်း စောင့်စီးရတယ်။ ဒိုင်နာက ညဘက်ဆို အန္တရာယ်အရမ်းများလို့ မစီးတာ။ နောက် ပိုဆိုးတာက တွယ်စီးတာ ပိုဆိုးတယ်သတိထားဟေး ဟိုကားက စုတ်ပြတ်ပြီ ကြာပဲကြာတာ ဒိုင်နာစီးလို့ ကြွသွားဦးမယ်…. တစ်ခါ ဒိုင်နာစီးတာ ဈေးဟောင်းကနေ အင်းစိန်ကို ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ ကားပေါ်မှာ ခါးပတ်မပါတော့ လူက ထိုင်စီးတာတောင် အနောက်လွှင့်နေတာ… စဉ်းစားသာကြည့်တော့ ဘယ်ကားမှအဆင်မပြေဘူး။ ထီကလည်း မပေါက်သေးတော့ ၀ယ်စီးဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဆူးလေပွဲဈေးလျှောက်ပြီး တစ်စီးလောက်ဝယ်ရကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေတယ်။
ပီားကောင်းတယ် ကောင်းတယ် ၀ယ်လိုက်
ကြေညာ ၀င်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး..အထူးကားတွေထဲမှာဆိုေ၇ွဧည့်သည် ကစီးလို့ အဆင်ပြေတယ်….စပယ်ယာတွေလဲ အပေါက်မဆိုးဘူး…ကျောက်လဲမချဘူး ပြိုင်မောင်းတယ်ဆိုတာလဲ ၇ှားတယ်…..ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်လူကြပ်တာ ကတော့ချွင်းချက်ပေါ့..
ဓါတ်ပုံထဲမှာေ၇ွဧည့်သည် ကား ကို ကြည့် ချင်ပါတယ်။
ပာုတ်ပဗျာ ဘယ်ကားမှအဆင်မပြေဘုး ကျွန်တော်လည်း ပို့စ်တင်ပြီး အော်နေ၇င် သိပြီးသားလူတွေပဲသိမှာ
အ၇င်တုန်းက အဓိပတိတွေကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ် တစ်ကယ်လည်းစီး၇တာ တန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ခုတော့ ဓါတ်ပုံတွေများများ၇ိုက်ပြီး တိုင်အုံးမယ်ဗျာ
ဒိုင်နာလည်းကြည့်စီးဘာတယ်ဗျာ စိတ်ပူပေးကျတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် သတိထားစီးမှာပါ။
သူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်လေးတွေလည်း ဒီမှာ ခံစားနိုင်ပါသေးတယ်… http://myanmargazette.net/94102/creative-writing
ပါရမီကတော့ ဆိုးပါတယ်ဗျာ။ ဟုတ်ပါတယ် ထိုင်ခုံတွေကလဲလုံးဝကိုမကောင်းပါဘူး။ ကျန်တာကောကောင်းလား ဆိုတော့ ကျန်တာလဲမကောင်းပါဘူး။ န၀ဒေး လိုအတက်လေးကိုတောင် မနဲတက် နေရတယ်။ တစ်ခါတုန်းက 176 စီးမိလိုက်ပါတယ်။ ခုံကကျိုးနေတာ နဲ့ ညပ်လိုက်တာ သွေးကိုထွက်ပါလေရောဗျာ။ နောက်တစ်ခုက ရေးထားလိုက်တာ၊ ကပ်ထားလိုက်ကြတာ ပါရမီက ဘိုးတော်တွေ စည်းကမ်းတွေများ။ အခု ၂၀ လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့အတိုင်းတော့ ဘယ်ကောင်မှ လိုက်မလုပ်ကြဘူး။ ကားတွေကို က သံရေကျို စက်ထဲပဲထဲ့ဖို့ကောင်းတော့တယ်။
မြန်မာပြည်သားေ၇ ပါ၇မီကိုတော့ သံ၇ည်ကျိုစက်ပို့လို့မ၇ဘူး အားလုံး ကော်ကားတွေကြီးပဲ
ကော်၇ည်ကျိုစက်ပို့ပြီး Recycle လုပ်ပြီး သေးအိုးလုပ်တာပဲကောင်းတယ်